Iindlela zokupheka zokupheka ezilula, ezilula kunye nezithengiyo - ukhetho luphela kuwe - ukuwapheka okanye cha.
Iveyile ngendlela yasemaphandleni
Emaqabini e-saladi, efafazwe ngembewu yamarharnate.
I-4 servings ye recipe:
500 g ye-pulp pulp
i-juice kunye ne-1/2 lemon
Itafile e-4. ipoyileji yeoyile yemifuno
Itafile 1. isipuni somgubo
I-100 ml yewayini ebomvu
1. Igrate inyama ngetyuwa kunye ne-nutmeg. Sika ii-apula zibe ziinqunto uze ususe umnqweno kunye nembewu. Iiplisi zeipulo zifafaza ngejisi lemon kwaye zifefe i-zest. Yenza imingxube ekudleni, i-vey veal kunye nama-apula, ufafaze i-sinamon uze uthule isigxina seoli yezityalo. Bhaka i-30-40 imizuzu nge-180 °. 2. Emva koko, ufafaze inyama kunye nomgubo, ufefe ioli eseleyo uze uthele iwayini kwisibindi. Bhaka enye imizuzu engama-30.
Ixesha lokupheka: 90 imizuzu.
Kwinye enye i-kcal 360 kcal
Iiprotheni - 26 g, amafutha - 23 amagremu, i-carbohydrates - i-10 gram
I-Steak ngokufaka izinto
Kwi "pocket" - iifologu kunye namaqanda kunye neenkwama-breadcrumbs.
500 g yenkomo yenkomo
Itafile e-2. ibhotela
i-1/2 yemon lemon
Amakhowe atyunwe kwiinqununu kunye nefry ebhotela. I-parsley. Amaqanda abethwa, axutywe ne-breadcrumbs, iparsley, i-lemon rind kunye nama-mushroom. Ixesha kunye nokuzaliswa, emacaleni ama-toothpicks okucoca. Bhaka imizuzu engama-40 kwi-180 °, ngokukhawuleza uphalaza inyama kunye nejusi ephumelelayo.
Ixesha lokupheka: 40 iminithi.
Ngenye ye-459 kcal
Iiprotheni - 31 g, amafutha - 32 g, i-carbohydrates - 11 amagremu
I-Veal ihamba ngamakhowe
Amanqatha ewayini kunye neziqhamo.
Kwi-6 servings ye recipe:
300 g yamagqabi
250 g yewayini emanzi emhlophe
200 g yokutya okutyongwe
Itafile e-2. iinkobe zeengqolowa zesonka
6 maqhinga. ziqhekeza
iinkuni ezinama-6 zantshontsho
50 g yeoli yeoli
1. Iimvumba kunye nesiqingatha se-anyanisi sinqunyulwe kwiikerubhi ezincinci, i-brown kwioli yeoli (10 imizuzu). Ixesha lokutya. 2. Yinqumle inyama kwiingcezu kuwo wonke amafayili uze udikibala. 3. I-anyanisi eseleyo yokugaya, uxuba kunye nenyama etyunyiweyo. Yinqumle inyama kwaye ubeke nganye i-spoonful of mushrooms kunye nenyama ecobile. Imfuyo iqhutywe kwiibhubhu kwaye iboshwe ngentambo okanye ifakwe kwi-skewers. 4. Beka imiqulu kwisikhwama, yongeza iwayini, yongeza i-prunes kunye namantongomane. Yiza kwi-thumba uze udibanise phantsi kwesiqhekeza kwishushu esincinane imizuzu engama-30.
Ixesha lopheka lokupheka: 45 iminithi.
Kwakhonza enye i-333 kcal
Iiprotheni - ama-28 amagremu, amafutha-i-17 amagremu, i-carbohydrate-13 amagremu
I-8 servings ye recipe:
500 g umqubu wesambatho
100 g yomgubo
Itafile e-2. ipoyileji yeoyile yemifuno
800 g inkukhu yenkukhu
100 g ibhotela
1. Amaqanda atyathwa ngobisi, umgubo kunye netyuwa. Ngamafutha eengcawa bhakabhaka amapakeki. Gweba ngokukhawuleza izibopho uze uzifake ebhotela (10 imizuzu). 2. Gweba ii-pancake ezi-2 ezivela kwimvubelo e-puff, enye-ubukhulu be-pancake, enye-kabini ububanzi. 3. Kwikhekhe encinci ukubeka, ukutshintsha, i-pancake kunye nokuzaliswa kwenkukhu. Phezulu ngekhekhe elikhulu. Ukubopha imida, uphonononge amaxesha amaninzi ngemfoloko. Bhaka imizuzu engama-45 kwi-200 °.
Ixesha lokupheka: 80 iminithi.
Kwingxenye 562 kcal
Iiprotheni - 34 g, amafutha - 19 g, i-carbohydrates - 64 g
I-Casserole kunye nenkukhu, ham kunye namakhowe
I-300 g yenkukhu yenkukhu, i-ham, i-anyanisi kunye nama-mushroom
Itafile 6. iikomityi zomgubo
500 ml yobisi
150 g ushizi
1. Gaya ama-mushroom kunye nama-mushroom, susela kwitafile e-1, isipuni ibhotela (10 imizuzu). Pheka i-fillet (imizuzu eyi-15) kwaye uthathe iinqununu ezincinane, ii-cub cubes. Inkukhu kunye ne-ham zixutywe kunye nama-mushroom, gazinga, ukunyusa, imizuzu emithathu. I-Grate ishizi kwi-grater emihle. 2. Lungisa i-sauce. Ukutsala umgubo, ugxotha, kwibhotela ekhoyo (3 min). Hlanganisa ubisi, upheke imizuzu emithathu. Hlanganisa inkukhu kunye namakhowe kunye nesiqingatha se-sauce kunye nesiqingatha seshizi esisikiweyo, xuba. Bilisa iipilati ze-lasagna (imizuzu engama-7). Yenza ukuzaliswa kwiplani nganye, uyiqhube nge-tube. Faka kwindawo ebunjiweyo, uthele i-sauce esele uze ufefe i-cheese esele. Bhaka imizuzu eyi-10 kwi-200 °.
Ngomnye ukhonza 395 kcal
Iiprotheni - 28 g, amafutha - ama-gram ayi-22, i-carbohydrates - 21 amagremu
Ifayile ekhutshisiweyo yenkukhu
Ngaphantsi kwe "ingubo" ye ham, i-pepper e-sweet and cheese.
2 iinkukhu ezinkulu ezinkukhu
2 iipods ezibomvu pepper
150 amagremu enyama ephekiweyo
70 g yeayonnaise
200 g yeeshizi ezinzima
20 g ye-anyanisi eluhlaza
1. Yenza i-pepper e-sweet in the rings, grate grate kwi-grater enkulu. Hamu uthathe iibhubhu ezincinci kwaye udibanise ne-mayonnaise. Sika i-anyanisi eluhlaza ibe yimichilo. 2. Hlaba i-fillet ngokukhawuleza, yipulele ityuwa, umpompo omnyama omnyama kunye ne-nutmeg. Fry kwioyile yemifuno (4 imizuzu kwicala ngalinye). 3. Faka ifillet kwi-mold, usasaze i-ham kunye ne-mayonnaise phezulu, gcoba i-pepper e-sweet and sprinkle it's cheated grese. Ncedisa ngamacwecwe e-anyanisi eluhlaza.
Kwenye inkonzo, 607 kcal
Iiprotheni - 46 amagremu, amafutha - 45 amagremu, i-carbohydrates - 5 amagremu
Ngamatamatati, ipilisi e-sweet and olives.
8 imilenze yenkukhu
Itafile e-4. ipofile yeoli yomnquma
ijusi ye-1 lemon
3 iipods pepper sweet
Ibhodlela eli-1 (750 ml) yetamatato kwijusi layo
50 g yemifuno ehlanjelweyo
125 ml yewayini ebomvu
Hlanganisa ioli yeoli, ijisi lemon, umnyama omnyama, i-paprika, i-basil kunye ne-curry. Ngomxube ofunyenweyo, uthele imilenze yenkukhu, ubhake imizuzu eyi-15 kwi-ovini kwi-200 °. 2. I-pulp ye-pepper e-sweet cut into cubes, anyanisi, i-garlic kunye neetamatato ukugaya. Yongeza iminqumo kwi-colander kwaye uvumele utywala. 3. Zonke izithako ezilungiselelwe ukubeka kwimilenze yenkukhu. Dlulisa kwiwayini, ixesha lokunambitha nokupheka kwenye imizuzu engama-30.
Ixesha lokupheka: 25 iminithi.
Ngomnye ukhonza 323 kcal
Iiprotheni - 16 g, amafutha - 25 g, i-carbohydrates - 8 g
Inkukhu yenkukhu kwi-bacon
4 iinkukhu ezinkukhu
4 iincindi zebhakoni
400 g yamatamatisi othandekayo
1 clove yegalikhi
100 ml ukhilimu okanye ubisi
Fakela ityuwa kunye nepepper. Gqungqa isahlulo ngasinye sebhekoni, ama-cobbles kunye ne-skewers zamaplanga. Ukushisa i-oyile yemifuno kwipani yokucoca kunye nokufakela iifomthi kwiimitha ezintathu kwicala ngalinye. Scoops susa. 2. I-Grate ishizi kwi-grater. I-Cream efudumele kwaye idibanise neeshizi, gubungela. Sika utamatisi zibe ngama-halves, susa i-resisi ze-pedicels. Gcoba i-clove e-garlic kwisiqingatha. 3. Ifomu ephosayo yokuxuba i-garlic, uthele i-half-half of cheese sauce, ifake isifuba kwi-bacon kunye neetatayi, uthele i-sauce esele. Ixesha kunye neetyuwa kunye nompompo omnyama omtsha ukula. Bhaka kwihovini imizuzu engama-20 kwi-180 °.
Ixesha lokupheka: 15 imizuzu.
Kwinye i-k375 kcal
Iiprotheni - 50 g, amafutha - 58 g, i-carbohydrates - 6 g
Umlimi onobumnandi obumnandi.
300 g yamagqabi amatsha
1 ipod yepilisi elibomvu elibomvu
1 i-karoti encinane
700 g yeetekisi
140 g yeeshizi
I-1/2 yeqela ledayi
1. Iiphampons zihlalutye kwaye zinqunyulwe zibe ziincinci ezincinci. I-anyanisi yahluthwa kwaye igalelwe iinqumlo zemiqolo, izaqathe - zincinci. 2. Geza i-pepper e-sweet pepper, uthathe iinqunithi, susa imbewu kunye ne-white septa, unqume inyama kwizikwere ezincinci. 3. Hlaziya izicatshulwa ezi-2. i-oyile yemifuno yeevenkile kunye nefry phezu kobushushu obuphantsi, ukuvuthisa, i-anyanisi kunye ne-karoti (imizuzu emi-5). 4. Hlanganisa amakhowa kunye nepilisi e-sweet, fry enye imizuzu eyi-15. Emva koko unyaka ngetyuwa kunye nepilisi emnyama emitsha ukuze ujongane. 5. I-peel iitapile kwaye uthathe iinqununu ezinkulu. 6. Kwipeni yokucoca, ukutshisa i-oli ekhoyo, ukubeka iifatate, ugubungele kwaye uchele malunga nemizuzu eyi-10. Yongeza ama-mushroom kunye nemifuno kunye ne-Fry bonke ndawonye omnye umzuzu ongama-5. 7. I-chese etyunwe yinqumle ibe yimincinci encinci, gcoba imifuno ngamakhowa kunye "nokuhlushwa" phantsi kwesiqhekeza enye imizuzu emi-5. 8. I-Dill ukuhlenga. Ukuhlobisa izityalo eziluhlaza ngokutya.
Kwakhonza omnye, 496 kcal
Iiprotheni - 17 g, amafutha - iigramu ezingama-31, i-carbohydrates - 41 grams
I-spaghetti ene-sauce ye-ukhilimu
400 amagremu wefrit (ingaqhwa)
20 g ye-basil imifuno
400 g ye spaghetti
Itafile e-2. ipofile yeoli yomnquma
150 ml ukhilimu
80 amagremu weeshizi ezinzima
2 iil lemons
Ama-mushroom ubilise 1 litre yamanzi (imizuzu eyi-15). Emva koko uphonsa kwi-colander, uqoke umhluzi we-mushroom kwisitya esisodwa. 2. Gcoba i-anyanisi kunye negalikhi. Amagqabi ambalwa e-basil ukubeka eceleni ukuhlobisa, i-greenhouse to grind. 3. I-spaghetti ibilise kwi-4-5 ilitha yamanzi anosawoti (malunga nemizuzu engama-10), ilahlwe kwi-colander kwaye uvumele ukukhupha umbane. 4. I-anyanisi edibeneyo negalikhi, evuselela, kwioli yeoli (imizuzu emithathu). Yongeza ama-mushroom kwaye ujonge enye imizuzu emihlanu. ITyuwa kunye nepilisi ukula. 5. Phala i-juice yelisi, umhluzi wamakhowa, ukhilimu, wongeza i-basil kumakhowa kunye no-anyanisi uze udibanise phantsi kwesiqhekeza ngomlilo omncinane imizuzu eyi-10. Yongeza i-spaghetti eshushu kwaye ubambe emlilweni omncinci kwiminye imizuzu engama-2-3. 6. Beka i-spaghetti kunye ne-sauce kwiiplate, ufefe ngeeshizi ezitshiziweyo, ugcobe ngamacembe e-basil uze usebenze.
Ixesha lopheka lokupheka: 50 iminithi.
Kwinye enye i-k345 kcal
Iiprotheni - 15 g, amafutha - 20 g, i-carbohydrates - 56 g
100 g isipinashi (ingaqhwa)
I-fletlet yenkukhu yenkukhu (malunga ne-150 g)
Itafile e-2. iipuni zeerayisi
300 ml i-soft fat fat
4 iziqu ze-anyanisi eluhlaza
i-parsley kunye nemifuno yemigodi
50 g yeeshizi elincinci
umthunzi omnyama womhlaba ukula
Iifotyi ze-inkukhu zityhila iitre eli-1 lamanzi abandayo kwaye zizise kwimilenze. Susa i-foam, upheke imizuzu eyi-10. Emva koko thabatha iifomthi, uthathe izicucu, ucoce umhluzi. Isipinashi ukuhlenga (ukuba kuyimfuneko, ngaphambi kokuba le nto ihlulwe) kwaye ugaya. Kwipeni yokucima, ukutshisa ioli yefuno, uthele kwitafile e-1, i-spoon umhluzi wenkukhu uze udlule isipinashi (10 imizuzu). Gcoba irayisi kakuhle. Umsila oseleyo uziswa kwi-thumba, engeza irayisi kwaye upheke phezu kobushushu obuphakathi kwemizuzu eyi-10. Yongeza isipinashi kwaye upheke enye imizuzu emihlanu. Yongeza ityuwa kunye nesobho, udibanise ukhilimu omuncu uze ususe ekushiseni. Yiyeke phantsi kwesiqhekeza imizuzu eyi-10. Hamba i-anyanisi eluhlaza ngamacong, kunye neeshizi-cubes. I-parsley eluhlaza kunye nelayidi ukuhlunga nokugaya, ushiya amaqabunga ama-mint ukuhlobisa. Isobho esilungele ukuthulula phezu kwamacwecwe, ngasinye sibeke isiqwenga sefotyi ephekiweyo. Isosi ifafaze kakhulu ngeengxube ze-anyanisi eluhlaza, i-parsley, i-dill ne-diced cheese. Ukuhlobisa, ukuba unqwenela, ngamagqabi amhlophe.
Ixesha lopheka lokupheka: 30 iminithi.
Ngomnye ukhonza 354 kcal
Iiprotheni - 15 g, amafutha - 29 g, i-carbohydrates -101
1 intloko yeelayiki
1/2 garnet okusanhlamvu
kwitafile e-2. iipuni zeoli yemifino kunye neviniga yewayini
I-1chspot yetshukela enegranulated
Ukubetha ngokukhawuleza ibhotela kunye neviniga kunye noshukela. I-anyanisi igqitywe emasongweni, uthele i-marinade kwaye uhambe ngeyure 1. I-squid ibilise ngamanzi abilayo ngamanzi (2 iminithi) uze unqunyulwe kwiindandatho. I-Apple yinqumle zibe ziinqununu, susa umnqweno kunye nembewu. Iinqaba ze-apula zifafaze ngejisi lemon. Iintlobo zeetetesi zihlenga, ziqhekeza zibe zicucu okanye zigawulwe zibe yimichilo. Hlanganisa i-anyanisi ekhethiweyo, i-squid, i-apple tincetu kunye ne-lettuce, yongeza ityuwa, i-pepper ukuze uzonambitha kwaye udibanise. Ukwahlula ngembewu yamarharnate.
Ixesha lopheka lokupheka: 5 iminithi.
400 g yepalp pulp
I-pinch ye-nutmeg ne-marjoram eyomileyo
Itafile e-3. ipoyileji yeoyile yemifuno
100 g yengqolowa ende
200 g weebhontshisi zamathanga
Iigali zivumeleke ngokushicilela. Sika inyama ibe yimichilo, yongeza ityuwa, ixesha kunye ne-nutmeg, marjoram kunye negalikhi, shiya imizuzu eyi-10. I-riil ubilise kude kube ngumlinganiselo wokupheka (imizuzu engama-7). I-anyanisi yinqumle iinqumlo zemiqolo, iinqwelo, iinqwelo, i-fry kwioli yendalo. Yongeza inyama kunye nelayisi, uthele i-150 ml yamanzi, utyane imizuzu engama-20. Emva koko udibanise ubhontshisi obunciniweyo, ukukhupha iimitha ezi-7 uze ususe ekushiseni.
Ixesha lokupheka: 55 imizuzu.
Ngomnye ukhonza 478 kcal
Iiprotheni - 100g, amafutha - 19g, i-carbohydrates-15g
Iitayi elihlaza kunye neziqhamo
1 ilitha yetiyi eluhlaza
200 g yeerpibisi
AmaRaspberries ukuhluma, amajikijisi eediliya ahluke kumahlumela. I-lemon kunye ne-lime zihlanjululwe kakuhle kunye ne-peel. Iintlobo kunye namajikijolo afaka kwisikhwama, uthele itiye elitshisayo, ukhupha kwaye ushiye imizuzu engama-20. Gxininisa kwaye ufake efrijini imizuzu engama-20. Kwizibuko, uchithe iibhobho zeqhwa uze uphulule isiselo esilahliweyo.
Kwinye enye i-kcal 70
Ukupheka ama-pancake amancinci ngemigodi, zokupheka kunye nezithombe
Izitya zentlanzi, zokupheka
Ukupheka okumnandi kwiitya zonyaka omtsha
Ukupheka: izitya ezimnandi zamathambo
Isaladi kunye nenkukhu kunye neenpine
Ukujongana nokunyamekela emva kokubeletha
Ukutya okunomdla, ukulimaza ukutya kweKremlin
Ingaphakathi lomnyaka omtsha-2017: iimfihlelo zokubhenela kwintando
UMthendeleko weFilimu wamaVenethi: siyazi ntoni ngokuncintisana kwefilimu ye-elitist?
Ukuthengwa kwefenitshala ekhaya: itafile